‘ए मेरो हजुर ४’का लागी नेपाल फर्कीईन सुहाना थापा, अनमोल संग जोडी बाधिने तयारी बारे बोलिन् – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /Video/‘ए मेरो हजुर ४’का लागी नेपाल फर्कीईन सुहाना थापा, अनमोल संग जोडी बाधिने तयारी बारे बोलिन्
‘ए मेरो हजुर ४’का लागी नेपाल फर्कीईन सुहाना थापा, अनमोल संग जोडी बाधिने तयारी बारे बोलिन्
काठमाडौ । नायिका झरना थापाको निर्देशनमा बनेको चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’ को सफलता पश्चात ‘ए मेरो हजुर ४’ को तयारी गर्नका लागी झरना थापा र सुहाना थापा नेपाल फर्किएका छन् । आज मात्र अमेरिकाबाट आमा छोरी नेपाल फर्किएका हुन् ।
‘ए मेरो हजुर ३’ बाट डेब्यु गरेकी झरना थापाको छोरी सुहाना थापालाई ‘ए मेरो हजुर ४’ मा फेरि दर्शकले देख्न पाउने भएका छन् । झरना थापा केही महिना देखि यस चलचित्रको स्क्रिप्टमा काम गरिरहेकी थिईन । चाडै नै फ्लोरमा जाने तयारीमा रहेकाले सुहाना सहित झरना थापा नेपाल फर्किएका छन् । ‘ए मेरो हजुर ४’ मा पनि दर्शकले अनमोल र सुहानाको जोडी हेर्न पाउने छन् भन्ने बुझिएको छ । तर आधिकारिक घोषणा भने चाडै नै कार्यक्रम बीच गरिने झरना थापाले जनाएकी छिन् । दर्शकले अनमोल र सुहानाको जोडी नै चलचित्रमा हेर्न चाहेकोले यस चलचित्रमा पनि यो जोडी दोहोरिने सम्भावना देखिएको छ ।
सुहाना थापाका अनुसार चाडै नै कार्यक्रम बीच घोषणा गर्ने तयारी रहेको जनाएकी छिन् । नेपाल फर्किने बित्तिकै सुहानाले मिडियासंग कुराकानी गर्ने क्रममा भनिन्, “दर्शकले मलाई पहिलो चलचित्रबाट यत्ति धेरै माया दिनुभएकोमा आभारी छु । अब फेरी म ‘ए मेरो हजुर ४’ मार्फत दर्शकहरु बीच आउने तयारी गरिरहेको छु र आशा छ दर्शकहरुले फेरी मलाई माया गर्नुहुनेछ ।”
मिडियासंग बोल्दै गर्दा सुहाना थापाले ‘ए मेरो हजुर’को गित गाउदै एयरपोर्टमा रमाईलो गरेकी थिईन । झरना थापाको निर्देशनमा बन्न लागेको चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ४’लाई सुनिल कुमार थापाले निर्माण गर्न लागेका हुन् ।
कपाल खौरिएको क्षण सम्झिएपछि सुरक्षा धेरै बोल्न सकिनन्, त्यो क्षण सम्झँदासम्झँदै सुरक्षाको बोली अड्कियो, आँखाबाट आँसु झर्‍यो !
तिम्ल्याहा बच्चाको जन्म ! यी दम्पतिले एकैपटक तिन लक्ष्मी भित्राएपछि खुशीको सिमा रहेन (भिडियो सहित)
Exclusive: रबि लामिछाने श्रीमती सगै हलमा पुग्दा जय जयकार ! सुन्तलीले माहौल बनाई यस्तो……(भिडियो सहित)